Lahaystayaal Masaari ah oo ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah oo xoog ku baxsadey, dileyna labo burcad badeed ah. [Akhris …] – Radio Daljir
Lahaystayaal Masaari ah oo ay afduub u haysteen burcad badeed Somali ah oo xoog ku baxsadey, dileyna labo burcad badeed ah. [Akhris …]
Agoosto 14, 2009 12:00 b 0
Laasqorey, Aug 14 – Koox soddomeeyo ah oo u dhalatay Masar ayaa waxaa ay ka baxsadeen koox burcad badeed Soomaali ah, iyaga oo diley labo ka mid ah burcaddii, waxaana wararku ay ku soo warramayaan in ay ka shiraacdeen xeebaha gobolka Sanaag ee dawlada Puntland.
Kooxdani oo dhawr bilood halkaas lagu haystey ayaa waxaa lagu guul darreystey in hab madax furasho ah lagu sii daayo iyaga oo horey u codsadey kooxda burcadda ahi in loo quuro adduun lacageed oo madax wareer ku riddey shirkaddii iska lahayd Markabka.
Markabkan ayaa waxaa uu ahaa nooca kalluumeysiga waxaana Burcaddu ay afduubatey xilli uu ku gudajirey kalluumi isaga oo ku sugnaa badda Soomaaliya, iyaga oo markii ay qafaasheenna la aadey xeebta degmada Laas Qorey.
Illaa iyo 11 kale oo burcadda ka mid ah ayeey horey u sii kaxeysteen kooxda Kalluumaysatada ah iyaga oo la sii aadey sida wararku ay sheegayaan dhinaca dalka Masar.
Dhawaan ayaa Markab kale oo laga leeyahay dalka Talyaaniga waxaa ay ka qaateen lacag madax furasho ah iyaga oo isla yaalley labada Markab isla meesha ay ka dhacdey dhacdadani inkasta oo markii danbe ay beenisey dawladda Talyaaniga in laga bixiyey markabkaasi wax madax furasho ah.
C/fitaax Cumar Geeddi.
Gaashaan, wasiir al dawlaha maamul-wanaaga Puntland oo ka xog waramay wax qabadkeedkii dawlada Puntland. [Dhegaysi …]
Madaxda sare ee dawladda Puntland oo kulan la yeeshay waxgaradka gobolka Mudug, kalana tashaday dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka gobolka. [Akhris …]